Kpop News – Taung Gyi
K-pop idol ဖြစ်ဖို့မွေးဖွားလာသူတွေလို့netizen တွေမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြတဲ့idol များ ဒီidol တွေဟာidol singer တွေဖြစ်ဖို့မွေးဖွားလာဟန်တူပီး‘Genius idols’ လို့လဲခေါ်ကြပါတယ်။Netizen တစ်ယောက်က‘Genius idols’ လို့ခေါ်တဲ့idol singer ဖြစ်ဖို့မွေးဖွားလာသူတွေကိုရွေးချယ်ဖို့online community တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ဒီlist ကတော့netizen တွေမှတ်ချက်ပြုခဲ့တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ 1.BLACKPINK’s Jennie 2.TWICE’s Sana 3.TWICE’s Nayeon 4.BTS’s Jimin 5.BTS’s V …
K-pop idol ဖြစ်ဖို့မွေးဖွားလာသူတွေလို့netizen တွေမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြတဲ့idol များ Read More
ကွာခြားတဲ့အရပ်တွေနဲ့Fan တွေကိုအသဲယားစေခဲ့တဲ့အမျိုးသားidol အတွဲ(၈)တွဲ Fan တွေအများစုက“သူတို့တွေကိုအတွဲတွေလို့ခေါ်လို့ရနိုင်မလား” ဆိုပီးမေးတတ်ကြပါတယ်။ယုံနိုင်မလားမသိပေမဲ့အရပ်ကွာကြတဲ့male idol (၂)ယောက်တူတူရပ်နေရင်ကိုFan တွေကအရင်ကထက်ပိုပီးရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတတ်ကြပါတယ်တဲ့။သူတို့အကြိုက်ဆုံးဒီလိုအတွဲ(၈)တွဲကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။အကြိုက်တွေထပ်တူကျရဲ့လားဆိုတာကြည့်ရအောင်။ SEVENTEEN’s Mingyu and Woozi NCT’s Johnny and Taeil PENTAGON’s Wooseok and Jinho SF9’s Rowoon and Chani BTS’ RM and Suga …
ကွာခြားတဲ့အရပ်တွေနဲ့Fan တွေကိုအသဲယားစေခဲ့တဲ့အမျိုးသားidol အတွဲ(၈)တွဲ Read More
ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ရုပ်ရည်တွေနဲ့မလိုက်အောင်အသံအားကောင်းလွန်တဲ့K-Pop Vocalist (၁၀)ယောက် ဒီK-Pop idol တွေဟာရုပ်လေးတွေအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းပေမဲ့အသံပါဝါကတော့အရမ်းကိုအားကောင်းပါတယ်။ဘယ်သူလေးတွေလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်။ 1. Ningning (aespa) 2. Jimin (BTS) 3.Sana(TWICE) 4. Onew (SHINee) 5. Jongho (ATEEZ) 6. Rosé (BLACKPINK) 7. Doyoung (NCT) 8. Winter (aespa) 9. Lily …
ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ရုပ်ရည်တွေနဲ့မလိုက်အောင်အသံအားကောင်းလွန်တဲ့K-Pop Vocalist (၁၀)ယောက် Read More
ထင်ထားတာထက်ရိုးရှင်းတဲ့Lisa ရဲ့စိတ်ကူးထဲကအိမ်ပုံစံ Lisa ဟာအရမ်းအောင်မြင်သလိုလက်တွေ့ဘဝမှာလဲသူလိုချင်တဲ့ဘယ်လိုအိမ်မျိုးမဆိုဖန်တီးနိုင်သူပါ။AskAnythingChat ရဲ့အင်တာဗျူးမှာသူမဟာအနာဂတ်မှာနေချင်တဲ့အိမ်ပုံစံအကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။Lisa ကတောင်တက်ရတာသိပ်မကြိုက်တဲ့သူမို့အိမ်ကိုတောင်တွေရှိတဲ့နေရာမှာမဆောက်ပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာရေနားမှာနေရတာကြိုက်တဲ့သူပါ။Lisa က“ပင်လယ်(သို့)ရေကန်တွေကိုရွေးချင်ပါတယ်။ရေတွေအနားမှာနေရတာကိုကြိုက်ပီးပင်လယ်တွေမြင်ရင်စိတ်အပန်းဖြေလိုက်သလိုခံစားရစေတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်ဆောက်ရင်ပင်လယ်(ဒါမှမဟုတ်)ရေကန်တွေရဲ့အနားမှာဆောက်ချင်ပါတယ်” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ “ဒါဆိုအိမ်မှာနေလိုက်ရုံနဲ့အားအင်တွေပြန်ပြည့်လာသလိုခံစားရမယ်လို့ထင်တယ်။သူငယ်ချင်းတွေက“Lisa ရဲ့အိမ်ကိုသွားချင်တယ်လို့“ပြောလာရင်သူတို့ကိုပင်လယ်ကိုသွားပြလို့လဲရတယ်။ဒါကအရမ်းကိုငါ့အတွက်တော့special ” ပါပဲလို့Lisa ကပြောခဲ့ပါတယ်။ Source:Koreaboo
ထင်ထားတာထက်ရိုးရှင်းတဲ့Lisa ရဲ့စိတ်ကူးထဲကအိမ်ပုံစံ Read More
မေလအတွင်းနာမည်အကျော်ကြားဆုံးK-pop အမျိုးသမီးidol (၃၀)ယောက်
မေလအတွင်းနာမည်အကျော်ကြားဆုံးK-pop အမျိုးသမီးidol (၃၀)ယောက် Korea Institute of Corporate Reputation ကနေမေလအတွက်အမျိုးသမီးK-pop idol တွေရဲ့နာမည်ကျော်ကြားမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစာရင်းကိုဧပြီလ(၁၅)ရက်နေ့ကနေမေလ(၁၅)ရက်နေ့အထိကောက်နုတ်ထားတာပါ။ BLACKPINK’s Jennie ဟာဒီlist ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရှိနေပီးCosmic Girls’ Bona နဲ့MAMAMOO’s Hwasa တို့ကလဲနောက်မှာအသီးသီးရပ်တည်နေပါတယ်။Jennie က3,850,732 score ရရှိထားပီးBona နဲ့Hwasa တို့ကတော့3,385,296 နဲ့2,481,278 score အသီးသီးရရှိထားပါတယ်။ ကျန်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးK-pop idol …
မေလအတွင်းနာမည်အကျော်ကြားဆုံးK-pop အမျိုးသမီးidol (၃၀)ယောက် Read More
K-pop အနုပညာလောကထဲမဝင်ဖြစ်ခဲ့ရင်သူဘာဖြစ်နေမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တဲ့EXO D.O.
K-pop အနုပညာလောကထဲမဝင်ဖြစ်ခဲ့ရင်သူဘာဖြစ်နေမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တဲ့EXO D.O. မေလ(၁၁)ရက်နေ့ကD.O. ရဲ့အင်တာဗျူးကိုYouTube channel တစ်ခုမှာတင်ခဲ့ပါတယ်။များစွာသောမေးခွန်းတွေထဲမှာမှအလုပ်တွေနားတဲ့ရက်တွေမှာဘယ်လိုမျိုးဖြတ်သန်းလေ့ရှိလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလဲဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။သူက“ငါကအစားအသောက်ကောင်းတွေစားရတာအရမ်းကြိုက်တဲ့သူပါ။ဒါကြောင့်အချိန်ရတဲ့အခါတိုင်းသွားစားကိုစားသင့်တဲ့နေရာတွေကိုအလည်သွားလေ့ရှိပါတယ်” လို့ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆက်ပီး“ဒီအကြောင်းကိုလဲအရင်တုန်းကအကြိမ်အနည်းငယ်ပြောခဲ့ဖူးပေမဲ့Fukuoka မှာအရမ်းကြိုက်တဲ့စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုရှိတယ်။အဲဒါကသွားဖူးသမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။အစားအသောက်တွေကအရမ်းကောင်းတော့အကုန်လုံးစားခဲ့တယ်။နောက်တစ်နေ့ကျတော့အစာအိမ်ကမခံနိုင်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲဒီနေရာကိုတစ်နေ့တော့ပြန်သွားချင်နေတုန်းပဲ” ဆိုပီးပြောခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပီးတကယ်လို့နောက်တစ်ခါပြန်မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ဘဝမှာဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်ချင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုD.O. ကချက်ချင်းပဲ“Chef တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ကလွဲပီးတစ်ခြားမတွေးမိပါဘူး။ချက်ပြုတ်ရတာနဲ့အစားအစာတွေကိုမြတ်နိုးတယ်။အားလပ်တဲ့အချိန်တွေမှာလုပ်ဖြစ်တဲ့သဘောကျတဲ့အရာဆိုလဲဟုတ်တယ်။K-pop idol အဖြစ်debut မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်chef တစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာပါ” လို့ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။ Source:Sbsstar
K-pop အနုပညာလောကထဲမဝင်ဖြစ်ခဲ့ရင်သူဘာဖြစ်နေမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တဲ့EXO D.O. Read More
BTS’s Jungkook(၃)ကြိမ်တိုင်တိုင်ပြောခဲ့ဖူးတဲ့Dating အကြောင်း Jungkook ဟာသူအပြင်မှာလိုချင်တဲ့kiss scene အကြောင်းတစ်ခါပြောဖူးပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကJungkook ဟာသူအတွေ့အကြုံရှိချင်တဲ့Dating အကြောင်းကိုအများကြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့သူDating အကြောင်းပြောခဲ့ဖူးတဲ့moment (၃)ခုပါ။ 1. His ideal type Jungkook ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကောင်မလေးပုံစံကတော့ကျန်းမာတဲ့body၊ကောင်းမွန်တဲ့muscle နဲ့လှပတဲ့ခြေတံရှိသူပါတဲ့။နောက်ပီးintelligent ဖြစ်တဲ့သူကိုလိုချင်ပါတယ်။သီချင်းဆိုတာနဲ့အချက်အပြုတ်တော်တဲ့girlfriend မျိုးလဲလိုချင်ပါတယ်။Jungkook ကယှဉ်ပြိုင်လိုစိတ်ပြင်းပြသူမို့သူ့ကောင်မလေးကလဲသူ့လောက်နီးပါးယှဉ်ပြိုင်လိုစိတ်ရှိတဲ့သူမျိုးဖြစ်ရပါမယ်။နောက်ပီးသူ့ထက်လဲပုရပါမယ်။ 2.အတွေ့အကြုံလိုချင်တဲ့kiss scene ပုံစံ Interview တစ်ခုမှာJungkook ကLove 911 movie ထဲကkiss …
BTS’s Jungkook(၃)ကြိမ်တိုင်တိုင်ပြောခဲ့ဖူးတဲ့Dating အကြောင်း Read More
နာမည်ကြီးK-pop company တွေရဲ့ကိုယ်စားပြုvisual တွေဖြစ်တဲ့idol များ ကိုးရီးယားအနုပညာလောကမှာရပ်တည်ဖို့အရေးကြီးဆုံးကတော့အလျော့မပေးပဲအဆုံးထိသွားနိုင်ဖို့ပါပဲ။ဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားမှုနဲ့အသိအမှတ်ပြုခံရမှုကလဲအောင်မြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေပါပဲ။K-pop လောကအတွက်နာမည်ကြီးCompany တွေဖြစ်တဲ့SM Entertainment, YG Entertainment, JYP Entertainment နဲ့HYBE တို့ကတော့သူတို့ရဲ့artist တွေကိုဂရုစိုက်စွာသေချာရွေးချယ်ကြပါတယ်။Data တွေအရcompany တွေကသူတို့စံနမူနာထားပီးလိုလားကြတဲ့visual တွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ SM SM ရဲ့ကိုယ်စားပြုvisual တွေဆိုရင်male idol တွေထဲကEXO’s Suho နဲ့Sehun တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။Female idol တွေထဲမှာတော့Girls’ …
နာမည်ကြီးK-pop company တွေရဲ့ကိုယ်စားပြုvisual တွေဖြစ်တဲ့idol များ Read More
ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပါးဖောင်းဖောင်းလေးတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့Female idol(၆)ယောက် ဒီfemale idol(၆)ယောက်ကတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပါးလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေပါ။Idol တွေဟာသူတို့body shape ကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်diet လုပ်တဲ့အခါမျက်နှာတွေကလဲသူ့အလိုလိုသွယ်လျသွားကြပါတယ်။တစ်ချို့ကလဲငယ်ငယ်တုန်းကပါးဖောင်းခဲ့ပေမဲ့အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါအသွင်အပြင်တွေပြောင်းပီးပါးလေးတွေကအစမဖောင်းတော့ပါဘူး။ပါးလေးတွေဆိုတာအပြုံးကိုပိုပီးတောက်ပအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သဘာဝလက်ဆောင်တစ်ခုပါ။အဲလိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပါးဖောင်းဖောင်းလေးတွေနဲ့fan တွေကိုအလွယ်တကူအရည်ပျော်စေနိုင်တဲ့အပြုံးပိုင်ရှင်လေးတွေကိုကြည့်ရအောင်။ BLACKPINK’s Jennie Lovelyz’s Sujeong (G)I-DLE’s Sujin IZ*ONE’s Wonyoung TWICE’s Dahyun Red Velvet’s Seulgi Source:Kstarlive
ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပါးဖောင်းဖောင်းလေးတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့Female idol(၆)ယောက် Read More
BTS’s Suga ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ideal type နဲ့Relationship အကြောင်း BTS member တွေRelationship နဲ့ideal type အကြောင်းပြောတဲ့moment တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီအကြောင်းအများဆုံးပြောခဲ့သူကတော့Suga ပါပဲ။Relationship အကြောင်းသူပြောပြဖူးတဲ့momentတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ 1.Suga ပြောခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့Ideal Type MBC‘s C-Radio Idol True Colors မှာBTS ဧည့်သည်အဖြစ်လာတုန်းကသူတို့ရဲ့ideal type ကိုပြောပြဖို့အမေးခံရပါတယ်။အဲဒီမှာSuga ကသူ့ရဲ့ideal type ဆိုတာတစ်ကယ်ကိုမရှိပါဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ထင်မြင်ချက်ကသူ့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုကနေသူ့ကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးကသာသူ့အချစ်ရမှာပါ။Love at …
BTS’s Suga ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ideal type နဲ့Relationship အကြောင်း Read More